Just Stand with Justice – The Art Garden Rohingya
Just Stand with Justice
Dec 11, 2019 AGR POETRY
By RY Mg Mg Khin
Sob or smirk
Stay or go to tell truth
Never bury nitty-gritty
Never try to lie
Humanity or dignity
Reality or vanity
Decision or extermination
Just stand with justice!
The Art Garden Rohingya
Taa Taa [Oli]
ခါးသီးလြန္းတဲ့ ေသျခင္းတရား (၂)
“႐ိုမ႐ုန္(န)၏ ေနာက္ဆံုးေျခသံမ်ား” စာအုပ္သစ္
Jan 01, 2021 AGR POETRY
ကဗ်ာခ်စ္ပရိသတ္တို႔အတြက္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကဗ်ာဆရာမ ႐ိုမ႐ုန္း(န)ရဲ႕ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ လက္ရာမြန္ ကဗ်ာစုစည္းမႈ "႐ိုမ႐ုန္း(န)၏ ေနာက္ဆံုးေျခသံမ်ား" စာအုပ္ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ေအာက္ပါလိင့္ကိုႏိွပ္၍ အခမဲ့ေဒါင္းယူပါ။ ပရိသတ္မ်ားအားလံုး ဖတ္႐ႈၾကည္ႏူးႏိုင္ပါေစ။ ⏬DownloadHere⏬ ႐ိုမ႐ုန္း(န)၏ ေနာက္ဆံုးေျခသံမ်ား
Nightmare | A poem by Ro ZHN
Dec 05, 2020 AGR POETRY
Nightmare By Ro ZHN That'sanightmare to me The day to end my life Buses came to take me I was about to run, but they came faster Asawoman in the barbarous camp Barbed wire fencing across No gate ...
မင်း​ဖြေကြည့်ပါ ဘာဆန်ဂျာ တစ်သက်တကျွန်းဆိုတာက ရာဇ၀တ်သားမဟုတ်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေလည်း ကျတာပဲလား? က​လေး​ငယ်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အာဟာရနပ်မမှန်လို့ ခန္ဓာကိုယ်ပိန်ချုံးချိနဲ့​​​နေကြတဲ့ သက်ကြီးရွယ်အို အဖိုးအဖွားတွေအားလုံးအတွက် လူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ လူ့တန်ဖိုး​တွေကဘယ်မှာလဲ ဘာဆန်ဂျာ? ငါတို့ချစ်တဲ့ အကို​တွေ၊ ညီမငယ်​တွေ၊ အ​မေအို​တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ ငါတို့အတွက် ကိုယ်ချင်းစာတရားက ကွက်ကျားမိုးပဲ ရွာတတ်ကြတာလား? မုတ်သုန်ဆို အန္တရာယ်များလွန်းပြီး အခြား​သောလူသတ္တ၀ါတွေ​တောင်မ​နေနိုင်တဲ့၊ (နေဖို့မသင့်တဲ့) မင်းဆီကိုပို့လိုက်ဖို့ ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်က အမိန့်​ပေးလိုက်တာလား? ကိုယ်ကြီးပြင်းရာ ဒေသ၊ အစစအရာရာ အသားကျ​နေတဲ့ အရပ်ကို ဘယ်သူကစွန့်ခွာချင်ပါ့မလဲ ဘာဆန်ဂျာ.. ဒါဆို ငါတို့ဘာလို့ ဒီ​ရောက်​နေလဲလို့​တော့မ​မေးပါနဲ့။ ငါတို့က စွန့်ခွာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ငါတို့ကို ခွေးလိုနွားလို၊ အမှိုက်သရိုက်လို မောင်းထုတ် စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ငါတို့လိုဒုက္ခသည်တွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဒုက္ခရောက်​နေကြတာကို လက်ခုပ်လက်၀ါးတီးပြီး အောင်ပွဲခံ​နေကြတဲ့ လူတစ်စုကို မေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက် ...
Editar Ólor Fonsón Rohingya Kavita (5)wá| 2021 Con, Januari
အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ်
Editors’ Choice Top5English Poems
Editar Ólor Fonsón Rohingya Kavita (5)wá| 2021 Con, Januari February 12, 2021
အယ်ဒီတာများ အကြိုက်အကောင်းဆုံး မြန်မာကဗျာ (၅) ပုဒ် February 10, 2021
Editors’ Choice Top5English Poems February 9, 2021
လူငယ်ကဗျာဆရာ “မောင်မောင်တင်” နှင့် The Art Garden Rohingya အင်တာဗျူး February 8, 2021